Ciriiri ka jira goobaha lagu xannaaneeyo waayeelka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ciriiri ka jira goobaha lagu xannaaneeyo waayeelka
La daabacay tisdag 19 januari 2016 kl 16.09
Waayeelka oo dalka ku sii badanaya
Sawirle: Alexander Jungå/Sveriges Radio
Hoos ayey u sii dhaceyaan goobaha lagu xannaaneeyo waayeelka, halka ey dhanka kale kor u sii kaceyaan tirada waayeelka dalka ku dhaqan, sida ku cad tira-koob ay ammuurtaa ku sameeysay idaacadda la iska daawado ee SVT. Tira-koobkaa ayey ku caddaatay in 15-kii sannadood ee ugu dambeeyey albaabbada loo laabay afar-daloolow mid goobaha lagu xannaaneeyo waayeelka ee dalka.
Maadaama ay kor u sii kaceeyso da’da ey nool yihiin bulshada iswiidhishka ayaa loo baahan yahay goobo ka badan inta maanta jirta ee lagu xannaaneeyo waayeelka. Halka dhanka kale aaney ahayn xaq sharciyan ah inuu waayeelku helo goob lagu xannaaneeyo. Iyadoo ey degmooyinkuna ku kala duwan helista uu waayeel boos ka mid ah goobaha waayeelka lagu xannaaneeyo.
Intii lagu guda jirey wixii ka dambeeyay sannadkii 2000 ayaa hoos loo dhigey 32.000 oo goobood boos ee waayeelka lagu xannaaneeyo. Waana saansaan laga arkeyo dhammaan degmooyinka dalku ka kooban yahay. Goolka la hiigsanayo ayaa ah sidii waayeelka loogu xannaaneeyn lahaa guryahooda illaa intii suurtagal ah, middaasina oo hor-seeday in waayeel badani ku khasbanaadaan iney guryahooda ku nagaadaan iyaga oo aan weliba dooneyn ama aan tabar u laheyn middaa.
– Maadaama hoos aad loogu dhimey boosaska goobaha waayeelka lagu xannaaneeyo muddo gaaban waxey waayeelku ku sii khasbanaadeen iney guryahooda ku sii nagaadaan, sida ay sheegtay Marta Szebehely, ahna caalimad ku takhasustay howlaha bulshada – socialt arbete.
”Siyaasiyiin aan u dhaqmeeyn caqli gal”
– Ama waxaannu leennahey siyaasiyiin aan aqoonba laheyn ama waxaannu leenahey siyaasiyiin aan u dhaqmeeyn caqli-gal oo amin-san in boosas badan oo waayeelka lagu xannaaneeyo la xiri karo, tallaabadaasina aanay wax dhibaato ah keenayn, sida uu sheegay caalinka Mats Thorslund, kuna takhasusay culuunta barashada bulshada waayeelka caafimaadka qaba - socialgerontologi.
Lena Hedquist iyo odaygeeda Einar ayay u qorsheeysnayd inay wada jir ugu raaxeeystaan nolosha howl-gabka, hase yeeshee aanay suurta-gelin. Odaygii Einar ayuu ku dhacay cudurkii asaasaqa ee waayeelka, halka ugu dambeeyntii ey ku adkaatay xaaskiisa Lena xannaanadiisii. Einar ayaa markiiba boos ka heley goob lagu xannaaneeyo waayeelka, hase yeeshee aaney degmooyinka dalku ka sinneyn middaa, maadaama aaney boosasku ku fileyn. Waana daldaloollo ey buuxiyaan shaqaalaha guryahooda ku soo booqda waayeelka, waxa loo yaqaanno hemtjänst.
– Dadka maanta ku gabooba dalka oo aan qaraabo ku lahayn ayaaney suurtagal u ahayn iney helaan nolol wanaag-san gabagabada noloshooda, sida ay sheegtay Lena Hedquist, ahna guddoomiyaha ururka waayeelka SPF Seniorerna ee xaafadda Bromma.
In la qiimeeyo baahida shakhsiga
– Waxaa kor loo qaaday saqafkii illaa heerka la isticmaali karo adeegga waayeelka lagu siiyo guryahooda, waxa lagu magacaabo hemtjänst, halka ay cidda saqafkaa gaadhana ey yihiin waayeel aad u xanuun-san, sida uu sheegay Mats Thorslund.
Dhammaan waxey xaq u leeyihiin in loo eego baahidooda, hase yeeshee ey degmooyinku middaa ku kala duwan yihiin. Sidaa daraadeed ayey ku kala duwan yihiin habka boos looga helo goobaha lagu xannaaneeyo waayeelka, middaasina oo ku xiran hadba degmada aad deggen tahay iyo qiimeeynta halkaa ka jirta. Maanta waxaa dhacda inuu waayeel badani dagaal arrinkaa uga socdo maxkammadaha iyo sidii ey ku heli lahaayeen goob waayeelka lagu xannaaneeyo oo ey ku noolaadaan. Waana halgan muddo dheer ku qaadan kara waayeelka iyo qaraabadoodaba.
– Degmadu waxay kor u qaataa saqafka lagu helo hooy waayeelka lagu xannaaneeyo kolka hadduu yar yahay ama aaney jirn boos. Waxaana la yiraahdaa: Waxaad leedahay baahi keeneeysa in aadan u baahnayn guryaha waayeelka lagu xannaaneeyo, sida uu sheegay Mats Thorslund.